Ezoshishino | Zwelitsha Online
Faka ishishini lakho
Bhalela umakhi wale website
Khenketha iZwelitsha kuGoogle Street View
Iinombolo zenkonzo zoluntu
IZwelitsha iseyiyo – ezoshishino
ngokubhalwe nguMonde Tabata
IZwelitsha ngimenyaka yoo1970 yayilangazelela ukuba yindawo ekhuphisana nabelungu baseQonce.
Oosomashishini ngela xesha babengayoki khuphiswano betyhala isifuba nakowuphi umceli mngeni.
Amashishini ayesohlukile babe oosomashishini basekuhlaleni bezibandakanya kuwo onke amashini avumelekileyo ezilokishini. Singalibali ukuba ngeli xesha kukho amashishini
ayengavumelekanga ukuba aphathwe aqhutywe ngabantu abantu abamnyama.
EZone 1, kukho ivenkile esasiyazi ngegama uOom Bonnie ekuhambeni kwexesha yaphathwa nguMnumzana Mabona. Wonke umfana waseThembalabantu owayesihoyile isisu sakhe ,wayethenga pha
ihalf yesonka esimhlophe, iErica Butter neCoke. UMnumzana Mabona wayandisa wayenza ngcono le venkile.
Singayilibali iTea Room ayeyingubhabhaza wevenkile eyayiphethwe ngabakhuluwa bakwaGuzana.
UOom Ridge Qeqe oqaqambileyo, wayengumnini weDry Cleaner, ishishini leebhasi, ekuhambeni kwexesha nevenkile yotywala.
USisi Betty Gaika emva kwexesha wahlangana noMnumzana Phil Kona baqhuba ivenkile yokutyela engundoqo eZone 5. USisi Betty noMnumzana Kona emva kwethuba bakha iqhayiya lwelokishi yethu iPhilbet Cinema eZone 4.
AbakwaSokupa baqhuba ivenkile ekwakufumaneka yonke into encinci yasendlini, uMnumzana Matsheketwa eZone 10 noPaul Guzana eZone 4 benza njalo.
Utata Malusi wabangusomashishini ophumelelayo kwezothutho, ngakumbi apha kwiitaxi, wawaqhuba la mashishini ixesha elide. Xa ndicinga uninzi lwabantwana nabazukulwana bakhe bangena kweli shishini ethubeni baziqesha, into eligugu kumasapho amanzinzi. Andikhumbuli ndidibana nomntana wakwaMalusi oqeshiweyo nanamhlanje.
Ngelo xesha kukho noBawo Nokhele, owayeneshishini lokuqokelela inkunkuma kwilokishi yonke. Emangalisayo, kwade kwabasekudaleni eyiqhuba ngokwakhe ilori yokuqokelela inkunkuma.
Andimlibalanga uMnumzana Nokubeka onobubele obumangalisayo, owayeneshishini lebhasi , inene elikhulu ukuba abukhangela, uselilo nangoku.
Umntu ukholelwa uSS Guzana wayeyinkosi yoshishino eZwelitsha. Abekho baninzi eZwelitsha naphi na phofu abaziyo ukuba wangena kushishino olukhulu ngapha kwaseZwelitsha. Bambalwa abaziyo ukuba ngomnye wabaseki beshishini iProsperity Insurance, lishishini elaliphethwe ngabantsundu bodwa phambi kokuba isizwe sicinge ngeBEE yale mihla. Ehlala eZwelitsha njalo,
wabangusomashishini owaziwayo kwilizwe lonke. USS Guzana uyidlalile indima yakhe ekukhuliseni ishishino lwabantsundu eMzantsi Afrika, bekumela yinto efundwa nzulu.
Yinto eyaziwayo eyokuba amashishini aseZwelitsha ekuhambeni kwexesha awela phantsi ngendlela egcumisayo, banqabile abaseki mashishini kwezi ntsuku. Sekuqhelekile ukuyokuthenga izinto zasendlini ezincinci eQonce kule mihla. Inene linxeba elifuna ukunyangwa eli. Oku kudilika koshishino luze neziphumo ezihambisa umzimba kwixesha apho bekumela iZwelitsha izisa ukukhanya kwindawo ezihlala abantundu ezweni lonke ngezoshishino.
Nov 14, 2013 in Ezamandulo, Ezoshishino
Iindaba zakutsha nje
Umbhiyozo wokusekwa waseSt John neSt Chad
Uqhutywe ngempumelelo umnyhadala wamanqindi eholweni
Uphando ngokungcola kwezitalato
Udidi lwamanqaku abhaliweyo
Bona Zonke iiGalleries
uluvo lwakutsha nje
IZwelitsha iseyiyo – ezemfundo nesiphetho
IZwelitsha iseyiyo – ulonwabo nomzabalazo
IZwelitsha yakhiwe kwinduli ekufuphi nefactory ebizwa ngeDa Gama. Lo mhlaba ngeminyaka yoo1800 wawungumhlaba olawulwa yiNkosi yamaNtinde uJan Tshatshu.
URhuluneli McLean yamaNgesi yawuthenga lo mhlaba ukuze ajikwe abe libala lomdyarho wamahashe osetyenziswa ngabahlali baseQonce.
funda apha imbali yonke
Iphepha lesiXhosa ilisolezwe
Proudly Zwelitsha Group kuFacebook
iZwelitsha Development Trust
Zweshok onemincili ngeZwelitsha kuFacebook
Zwelitsha Online @zwezweonline
RT @SAPoliceService #sapsEC 18 Arrested in EL, Zwelitsha, Bhisho & KWT respectively for public (cont) https://t.co/L2BZguP8vd
Apr 24, 2016 1:24pm
Lira sizakuxabana ukuba uwukhethi uSibulele Miti wethu #thevoiceSA
Apr 24, 2016 1:17pm
Sibulele siculele sisi #thevoiceSA
Apr 9, 2016 6:04pm
bakhawulezise ukwakha le mall, nemisebenzi keiye kubahlali https://t.co/oi1e36LBm7
Apr 27, 2015 8:43pm
Zwelitsha website ithi nangamso ngokundwendwela, nangamso